Nintendo na -egosi nsonaazụ ego nke nkewa mkpanaka ya Androidsis
Nintendo na-eto kwa ụbọchị kwa na ntanetị. Ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ?
Ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ Japan dị ugboro ugboro ịbanye ahịa ahịa ekwentị, n'ikpeazụ Nintendo nyere, na-atụba ihe egwuregwu mbụ Mario egwuregwu maka gam akporo na iOS. Firmlọ ọrụ ahụ gosipụtara akara tupu na mgbe ọ abanyechara azụmahịa na-eme nke ọma.
Na eziokwu bụ na, ọ bụ ezie na na mbụ na Japanese ụlọ ọrụ ahụghị ọdịnihu na mobile nyiwe, ihe na-agbanwe, na anyị nwere nke a na ịrịba pụta na ya mobile nkewa na-aghọrọ. Nintendo na-enweta ego karịa na egwuregwu ya karịa Sony na ire ere!
Ọkụ Ọkụ: Ndị dike, nnukwu ihe ịga nke ọma Nintendo na gam akporo
Anyi aghaghi iburu n’uche na uru ndi ụlọ ọrụ Japanese na-egwu egwu na-enweta bụ nke a na-achị ọchị ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na kọmpụta desktọọpụ dị iche iche na katalọgụ egwuregwu ha maka nyiwe ndị a, mana ịhụ ka ọnụọgụgụ na-eto, o doro anya na Nintendo bụ na-eme ihe nke ọma. N'ezie, Mario abụghị onye bu ụzọ buru ezigbo ọnụ ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, mana Ọkụ Ọkụ: Ndị dike.
Nintendo Ugbu a Na-anabata Ngwa maka Mario Kart Tour Emechiela Beta
N'okwu a, anyị na-ekwu maka ihe zuru ezu RPG na nnukwu usoronye onye mere Nintendo uto na nyiwe mkpanaka dị oke egwu. Ka anyị hụ ọnụ ọgụgụ uru nke ụlọ ọrụ ahụ, bipụtara na weebụsaịtị ya: na 2015, ụlọ ọrụ ahụ edeghị ihe ọ bụla na nkewa mkpanaka, mana ugbua na 2016 ọ jisiri ike ruo nde euro 46.
Na 2017, ụlọ ọrụ ahụ na-aza ruru nde euro 195. Na lezienụ anya, gịnị Pokémon GO abụghị naanị site Nintendo, ya mere onu ogugu enwere ugbua abughi site na egwuregwu a kuru egwu. Ugbua na 2018 ha ruru nde euro 315. Na ekele niile maka ihe ịga nke ọma nke ndị dike Emblem Fire. Na na 2019? Thelọ ọrụ ahụ eruola nde euro 369. Fọdụ ọnụ ọgụgụ dị mma na nke ahụ, na mbido Mario Kart dị nso, ga-abawanye karịa.
Nintendo Ọ na - emesị mee ihe nke ọma ma, ọ bụrụ na ọ gaa n'ihu otu a, ọ ga - egosipụta onwe ya dịka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa ma a bịa n'egwuregwu egwuregwu na ekwentị gam akporo anyị na mbadamba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nintendo na-eto kwa ụbọchị kwa na ntanetị. Ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ?
Emeela Nubia Red Magic 3
Mozilla ga-eji Fenix ​​dochie Firefox na ọnwa ole na ole